Nepali Rajneeti | विश्व नै शाकाहारी भए के हुन्छ ?
बैसाख २६, २०७८ आइतबार २६१ पटक हेरिएको
काठमाडाैं । यदि विश्वभरका सबै मानिस सधै‌ंका लागि शाकाहारी भए यसको प्रभाव जलवायु, वातावरण, हाम्रो स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रमा कस्तो पर्ला?
२. अक्सफोर्ड मार्टिन स्कुलको फ्युचर अफ फुड प्रोग्रामका अनुसन्धानकर्ता मार्को स्प्रिङ्म्यानका अनुसार खाद्य सामाग्रीबाट हुने ग्रिनहाउस ग्यास उत्सर्जन ६० प्रतिशत घट्नेछ। उत्सर्जनमा आउने यो कमी रातो मासु को उपभोग बन्द भएकाले हुनेछ। किनभने रातो मासु उत्पादन हुने पशुले मिथेन ग्यास उत्सर्जन गर्छन्।
तर, हामीले पोषणका केही वैकल्पिक खानेकुराले मासुलाई विस्थापन गर्नुपर्छ। अहिले विश्वभर करिब दुई अर्ब मानिस कुपोषणग्रस्त भएको अनुमान गरिन्छ। खाद्यान्नको तुलनामा मासु र यसबाट उत्पादित खानेकुराबाट धेरै पोषण प्राप्त हुन्छ। (बिबिसी)